ဟိုက်ဒရိုကွီနုန်းအရေပြားအရောင်တင်လိမ်းဆေးဆိုတာ - Hello Sayarwon
အရေပြားတောက်ပစေသောအရာတော်တော်များများတွင် ဟိုက်ဒရိုကွီနုန်းသည် အောင်မြင်မှုရနိုင်သည်သေချာသောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော် သူ့၏မကောင်းသောဆိုးကျိုးများလည်းရှိနိုင်သည်။ ဒိဆောင်းပါးသည် ဟိုက်ဒရိုကွီနိုလုံးပါသောထုတ်ကုန်များသုံးမည်ဆိုပါက ဟိုက်ဒရိုကွီနိုလုံးအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ကိုပေးနိုင်သည်။
ဟိုက်ဒရိုကွီနှုန်းလိမ်းဆေးသည် အရေပြားချွတ်သောအရာတစ်ခုဖြစ်ပြီး အရေပြားမဲနေသောနေရာများကိုပိုတောက်ပစေရန်သုံးနိုင်သည်။ ထိုသို့မဲနေခြင်းသည် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်း သန္ဓေတားဆေးသုံးခြင်း ဟော်မှန်းဆေးများ သို့မဟုတ် ထိခိုက်မိခြင်းကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ အရေပြားပေါ်ရှိဆဲလ်များ၏အင်ဇိုင်းကိုတားခြင်းဖြင့်အလုပ်လုပ်သည်။
လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာက ဟိုက်ဒရိုကွီနှုန်းကို လိမ်းဆေးတွင်ပါဝင်သောအရာအဖြစ်သာသုံးခဲ့သည်။ စိတ်ရှုပ်စေသောအရာက ထိုဆေးသုံးပါက ဖြစ်လာနိုင်သောဆိုးကျိုးများရှိသည်။ ထိုကြောင့် ထိုထုတ်ကုန်များသုံးရန် စဉ်းစားလာကြသည်။ ထိုလိမ်းဆေးသည် လူတိုင်းအတွက်မဟုတ်ပါ အဓိကအားဖြင့် အချိုသောအခြေအနေရှိေနေသောလူများ ဥပမာ ပန်းနာရင်ကြပ် နှင်းခူ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်း သို့မဟုတ် အရေပြားဓါတ်မတည့်သူများခံစားလွယ်သောအသားအရည်ရှိသူများတွင်မသုံးသင့်ပါ။
ဟိုက်ဒရိုကွီနှုန်း၏မကောင်းသောနောက်တစ်ချက်ပါ တခါသုံးပြီးပါက ရပ်ရန်ခက်ခဲသည်။ မယ်လနင်ဖြစ်စေသော အင်ဇိုင်းတိုင်ရိုကိုင်းနေ့ကို တားခြင်းဖြင့် အလုပ်လုပ်သည်။ ဟိုက်ဒရိုကွီနှုန်းသည် တိုင်ရိုကိုင်းနေ့ကိုတားပြီး အရေပြားအရောင်ဖြစ်စေသောအရာကိုပါတားသည်။ ကံမကောင်းစွာ ဟိုင်ဒရိုကွီနိုလုံးကိုသုံးပြီး ရပ်လိုက်ပါက ပုံမှန်ထွက်နေသော တိုင်ရိုကိုင်းနေ့ကိုမတားနိုင်တော့ပဲ သင့်ပုံမှန် အသားအရေတဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်ဖြစ်သွားလိမ့်မည်။
ထိုကြောင့်ဆရာဝန်မှ လေးလစီသုံးခြင်း၊ အခြားပျော့သော တိုင်ရိုကိုင်းနေ့တားဆေး -ဥပမာ အဇီလစ်အက်စစ် ကိုဂျစ်အက်စစ်နှင့် အာဗျူတင် – နှင့်တစ်လှည့်စီသုံးရန်ဆရာဝန်မှညွှန်ကြားသည်။
နောက်တစ်ချက်မှတ်သားရန်မှာ ဟိုင်ဒဥရိုကွီနိုလုံးသည် အခြားသောအရာများ ဖီနော၊ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်စိုက်၊စလီစလစ်အက်စစ် သို့မဟုတ် ဗန်ဇောပါအောက်စိုက် များနှင့်အလွယ်တကူ ဓါတ်ပြုလွယ်သည်။ ဟိုင်ဒရိုကွီနိုလုံးကို ပါအောက်စိုက်ပါသော ထုတ်ကုန် (ဟိုက်ဒရိုပါအောက်စိုက် သို့မဟုတ် ဘန်ဇွုင်းပါအောက်စိုက်) များနှင့်တွဲသုံးမိပါက အရေပြား အရောင်စွဲခြင်းကိုဖြစ်စေသည်။ ထိုကြောင့် ထိုပစ္စည်းများနှင့်တွဲသုံးခြင်းကိုရှောင်သင့်ပြီး မရှင်းလင်းသည်ရှိပါက ဆေးပညာအကြံပြုချက်ကိုယူသင့်သည်။
နောက်ဆုံးအနေနှင့် ဟိုက်ဒရိုကွီနှုန်းသည် ကြာရှည်စွာနေ လေထိပါက ထူးခြားသောအညိုအရောင်အဖြစ်အလွယ်တကူပြောင်းလဲလွယ်သည်။ ထိုအခြေအနေက ဟိုက်ဒရိုကွီနှုန်းကိုဖန်ဘးူတွင်ထည့်တားသောအခြေအနေတွင်ပိုဖြစ်တတ်သည်။ ဟိုက်ဒရိုကနှုန်းအကြောင်းစဉ်းစားနေပါက သူကို မေဖောက်နိုင်သောပစ္စည်းဖြင့်ထည့်ထားသင့်ပြီး အလင်းဖြင့်ထိခြင်း လေထိသောပမဏနည်းအောင်လုပ်ပေးခြင်းများလုပ်သင့်သည်။
နိဂုံးချုပ်မည်ဆိုပါက ဟိုက်ဒရိုကွီနှုန်းကိုမှန်ကန်သောပမာဏ (ဆရာဝန်ညွန်ကြားချက်ပါက ၄ ရာခိုင်နှုန်း) ကိုသာသုံးသင့်ပြီး အပြင်လိမ်းဆေးအဖြစ်သာသုံးခြင်းနှင့် အခြားဖော်ပြပါအရာများနှင့်တွဲမသုံးသင့်ပါ။ ဟိုက်ဒရိုကွီနှုန်းသည် သင့်အရေပြားပေါ်တွင်မယုံနိုင်လောက်အောင်ထိရောက်စေသည် ဟုလေ့လာချက်များကပြောပြီးဖြစ်သည်။ သို့သော် အသားဖြူစေသောအရောမသုံးမှီ မကောင်းသောဆိုးကျိုးများ သင်လိုချင်သည့်အရာ သင့်အခြေအနေများကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။
Hydroquinone Skin Bleaching Topical. http://www.webmd.com/drugs/2/drug-87530/hydroquinone-skin-bleaching-topical/details#uses. Accessed August 1, 2016.
Hydroquinone for Skin Lightening. http://www.paulaschoice.com/expert-advice/brown-spots/_/hydroquinone-for-skin-lightening. Accessed August 1, 2016.
Hydroquinone cream. https://www.drugs.com/cdi/hydroquinone-cream.html. Accessed August 1, 2016.
5 LITTLE KNOWN-FACTS EVERY HYDROQUINONE USER NEEDS TO KNOW – IMMEDIATELY!. https://www.futurederm.com/5-little-known-facts-every-hydroquinone-user-needs-to-know-immediately/. Accessed August 1, 2016.